गृहमन्त्रालयले प्रहरी कार्यालयलाई भन्यो ,चार एआइजिलाई जिम्मेवारी देऊ
१ मंसिर,काठमाडौं– लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएका तर जिम्मेवारी नपाएका चार एआईजीलाई जिम्मेवारी दिन गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भनेको छ । उसले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । मंगलबार गृहमन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बढुवा भएर जिम्मेवारी नपाएका एआईजिहरु यादव अधिकारी, विश्वराज सिंह शाही, सुशीलवरसिंह थापा र पर्शुराम खत्रीलाई जिम्मेवारी दिन भनिएको छ । ०७१ सालमा सातजना एआईजिको दरबन्दीमा विशेष पद सिर्जना गरेर ९…विस्तृत समाचार »
​जनताको करमा सरकारको रजाइँ, सरकारी रबैयाका कारण करदाता निरूत्साहित
एलिजा उप्रेती । “कर र मृत्यु अकाट्य विषय हुन्, जुनबाट कसैले छुटकारा पाउँदैनन्” एकजना दार्शनिकको यो भनाईले पुष्टि गर्छ कि मानिसको जीवनमा कर तिर्नु कति आवश्यक छ भन्ने कुरा । राज्यको मुल स्रोत नै कर हो भने त्यहि करले नै समाज र मुलुकको विकास हुने हो । यहि अनुरूप मानिसले आफ्नो आम्दानी तथा कार्यको केही अंश राज्यलाई कर तिर्ने गर्छं । आज मंसिर १…विस्तृत समाचार »
मरुभुमी जलबायूलाई माया गर्नेको लागि हो रमाइलो आवुदाबी
आबुदाबी यूएइको राजधानी हुनमा मात्र सिमित छैन यो त रमाइलो राजधानीको रुपमा पनि परिचित छ । आबु दाबीको मरुभूमि जहाँ एक मनोरम दृष्यसंग सामिप्यता पाइन्छ । रातको समयमा मरुभूमीको आकाशमा उडीरहेको बेलुनको दृष्यले जोकोहीलाई पनि एक विशेष आनन्द प्रदान गर्दछ । सो मरुभूमीको बिचमा एक आरामदायी र सुविधा सम्पन्न होटेल रहेको छ । त्यहाँ हुने रात्रीभोजको आनन्द लीएर फर्कनेहरुले फेरी फेरी धाउने इच्छा राख्दछन् ।…विस्तृत समाचार »
​एमाले विनानै संविधान संसोधन गर्ने प्रचण्डको भित्रि प्लान ,दुईतिहाइ जुटाउन दौडधुप
१ मंसिर,काठमाडौँ । पछिल्ला दिनमा संविधान संसोधन प्रचण्डका लागि गलाको पासो जस्तै बनेको छ । संविधान संसोधनमा केही बुँदा कुनै दलका नेता बिशेषले मन पराएपनि त्यही बुँदामा साथ नदिने अर्को दलको अडानका कारण प्रचण्ड यतिबेला संविधान संसोधनको तनावमा देखिएका छन् । सबै दललाई चित्त बुझाएर संविधान संसोधन गर्नु उनका लागि त्यति सहज भने छैन् । यता मधेसी मोर्चाका आफ्नै खालका अडान छन् भने उता एमाले…विस्तृत समाचार »
दलहरुको सातो जानेगरि मुख खोले लोकमानले,अदालतमै दिए यस्तो बयान
१,मंसिर,काठमाडौं । संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि निलम्बित लोकमानसिंह कार्कीले आफू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बहालवाला प्रमुख आयुक्त भएको दाबी गरेका छन् ।सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्ने क्रममा कार्कीले आफूलाई ‘बहालवाला प्रमुख आयुक्त’का रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा आफ्नो परिचय प्रस्तुत गर्ने क्रममै बहालवाला प्रमुख आयुक्त भनि उल्लेख गरेका छन् । लिखित जवाफको दोस्रो बुँदामा पनि…विस्तृत समाचार »
नेपालले फुटबलमा जित्यो अहिलेसम्मकै ठूलो उपाधि, उपाधीमा ह्याट्रीक
३० कार्तिक काठमाडौ । नेपालले ६२ बर्षे फुटबल इतिहाँसमा सबैभन्दा ठुलो उपाधी जितेको छ । एएफसी सोलिडारिटी कपको फाइनालमा मकाउलाई एक शुन्यले पराजित गर्दे नेपालले यो सफलता हात पारेको हो । मलेसियाको कोचिङमा भएको एएफसी सोलिडारिटी कपमा भरत खवासको पासमा २९ औ मिनेटमा सुजल क्षेष्ठले नेपालका लागि गोल गरेका थिए । कप्तान विराज महर्जनको नेतृत्वमा उत्रिएको नेपाली टिमले बगबन्धु गोल्डकप, १२ औ साफ च्यापिनेसिफ…विस्तृत समाचार »
​सोलिडारिटि कप फाइनल(LIVE) : नेपाल : १ मकाउ : ०
ताजा अवस्थामा लनेपालले १–० ले अग्रता लिएको छ । भरत खवासको पासमा सुजल श्रेष्ठले गोल गरेका हुन् । विस्तृत समाचार »
आफ्नै गृहजिल्ला रौतहटमा कार्यक्रम गर्दागर्दै माधव नेपाल लखेटिए
राकेश यादव,३०,कात्तिक,रौतहट । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल आफ्नो गृह जिल्ला रौतहटमा कार्यक्रम गर्दा मधेसी मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले कार्यक्रम विथोलीदिएका छन् । मधेस विरोधी नेता मुर्दावादको नारा दिँदै नेता नेपालको विरोध हुन थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी मोर्चाका नेताहरुलाई पक्राउ गरी हिरासमा राखेको छ । जिल्लाको संसदीय बजेटको बारेमा छलफल गर्न नेता नेपाल जिल्ला विकास कार्यालयमा पुगेका थिए । मोर्चाको अवरोधपछि माधव नेपाल…विस्तृत समाचार »
​महानिरिक्षक अर्याललाई भेट्ने वित्तिकै प्रचण्डले भने तपाईलाई कसले हटाउन लागेको ?
३० कार्तिक,काठमाडौँ । प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई सरकारले हटाउने चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने फरक आस्वासन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई तपाईलाई हटाउने कुरा निकै चर्चामा छ तर तपाई नडराउनुस ,ढुक्क भएर काम गर्नुस् भन्दै अर्याललाई आश्वासन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवासमै पुगेका आईजीपी अर्याललाई प्रधानमन्त्रीले ढुक्क भएर काम गर्नको लागि आग्रह गरेका…विस्तृत समाचार »
प्रचण्डको आडमा माओवादी नेताले यसरी लुटे राज्यकोषको ५ करोड ! हेर्नुस् क–कसले लुटे
३०,कात्तिक,काठमाण्डौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले राज्यकोषमा मस्ती गर्न थालेका छन् । उनीहरुले युवा स्वरोजगार कोषबाट लिएको ५ करोड फिर्ता गरेका छैनन् । माओवादीका नेताहरुले मजदुर शहीद स्मृति सहकारीको नामबाट युवा स्वरोजगार कोषबाट ५ करोड झिकेका थिए । माओवादीकै शीर्ष नेताहरुको सिफारिसमा युवा स्वरोजगारले आफ्नो कार्यविधि नबन्दै २०६८ साल मंसिर १ गते ५ करोड दिएको थियो । मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी…विस्तृत समाचार »